नेपाल आज | डलर अर्बपतिका कारण नबिल ‘ब्लाक लिष्टेड’ को घेरामा !
शुक्रबार, ०१ असोज २०७८
डलर अर्बपतिका कारण नबिल ‘ब्लाक लिष्टेड’ को घेरामा !
बुधबार, ३१ भदौ २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
डलर अर्बपति तथा सभासद् विनोद चौधरीका कारण नबिल बैंक ‘कालो सूची’ मा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । बङ्गलादेशको एएमएल सीएफटी कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय जानकारी इकाइ र भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग (एसीसी) ले नबिलका मुख्य लगानीकर्ता एवम् एनबी इन्टरनेशनलका अब्दुल आवल मिन्टु र उनको परिवारको सम्पत्तिको स्रोत खोजबिन गरेपछि उक्त सम्भावना बढेको हो ।
एएमएल सीएफटीको कारण कालो सूचीमा परेमा कुनैपनि बैंकले जारी गरेको प्रतित पत्र (एलसी) विश्वका अन्य बैंकले स्वीकार्दैनन् । त्यसैगरी त्यस्तो बैंकले विदेशी मुद्राको अन्य कारोबारसमेत गर्न पाउन्न।
अब्दुल आवल मिन्टु
नबिलले एएमएल सीएफटीको निर्देशन पालना नगर्ने सबैभन्दा कमजोर बैंकको रूपमा यसअघि नै नाम कमाइ सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघिको स्थलगत सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा समेत बैंकले एएमएल सीएफटीको निर्देशन पालना नगरेको संस्थागत सुशासन शीर्षकअन्तर्गत उल्लेख गरेको थियो ।
नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनल, बङ्गलादेशको ५० प्रतिशत सेयर लगानी छ । त्यसमध्ये आधा लगानी एनबी इन्टरनेशनल, आयरल्याण्डको हो । बाँकी आधा बङ्गलादेशी राजनीतिज्ञ, व्यवसायी तथा उद्योगपति अब्दुल आवल मिन्टुको र अन्तिम आधा चौधरीको कम्पनी सिनोभेसन ईंन्कको हो । सिनोभेसनका तीनजना साझेदारमा विनोदसहित उनका छोराहरू राहुल र बरुण छन् ।
एनबी इन्टरनेशनल, बङ्गलादेशका मिन्टु,उनकी श्रीमती र छोराले गैरकानुनी माध्यम प्रयोग गरी मुलुकबाट पुँजी पलायन गरेको आरोपमा थालिएको सरकारी अनुसन्धानलाई हालै तीब्र पारिएको छ । बङ्गलादेश पनि नेपालजस्तै कानुनी व्यवस्थामा तोकिएबाहेक विदेशी मुद्रा अन्य मुलुकमा एक डलर पनि लैजान नपाइने मुलुक हो ।
विशेषगरी यसअघि नबिलबाट प्राप्त सबै नगद लाभांश वापतको डलर सोझै ढाका लगिएको हो भनेपनि त्यहाँबाट अन्यत्र लैजान मिल्दैन र पाईंदैन । मिन्टु र उनको परिवारको सम्पत्तिको स्रोतमाथिको छानबिनले चौधरीको सिनोभेसनले ढाकामा प्राप्त गरेको भनिएको नगद लाभांशको हैसियत र अवस्थाको बारेमा समेत अहिले बङ्गलादेशमा प्रश्नचिन्ह उठेको छ ।
बङ्गलादेश पनि नेपालजस्तै कानुनी व्यवस्थामा तोकिएबाहेक विदेशी मुद्रा अन्य मुलुकमा एक डलर पनि लैजान नपाइने मुलुक हो ।
ढाकामा भइरहेको छानबिनमा मिन्टुले नेपालको नबिल बैंकमा लगानी गरे वापत हरेक वर्ष डलरमा प्राप्त नगद लाभांश मुलुक नल्याएको आशंका गरिएको छ । अर्कोतर्फ, अढाई दशकअघि नबिल बैंकमा गरिएको करोडौं लगानीको समेत स्रोत खोजिएको छ । यसबाट एनबी इन्टरनेशनल, बङ्गलादेश र चौधरीको सिनोभेसनको ‘डलर चेन’ को रहस्य खुल्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले नेपालबाट लैजानुपर्ने भनिएको एनबीको नामको डलर लाभांश ढाका नलगी आयरल्याण्ड वा अन्यत्र पुर्याएको आशंकामा थप अनुसन्धान भएको हो । यसले लाभांश रकम रकमान्तर गर्ने नबिल समेत शङ्काको घेरामा तानिएको बुझिएको छ ।
एसीसीले बर्मुडामा रहेको मिन्टुको एनएफएम इनर्जी कम्पनीको कारोबार समेत खोतल्न थालेको छ । यसका लागि नबिलबाट यसअघि पठाइएका सबै डलर लाभांशको ट्रयाकिङ्ग हुने निश्चितझैँ देखिएको हो ।
ढाकामा अघि बढेको मिन्टु र एनबीबिरुद्धको अनुसन्धानले राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी इकाइको सामुन्ने कानुनबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका निभाउन अग्निपरीक्षाको घडी आएको छ । एसीसीले आशङ्का गरेझैँ एनबीले नबिलबाट ढाका लैजानुपर्ने डलर लाभांश एनबी इन्टरनेशनल, आयरल्याण्डको नामबाट अन्यत्र लगे वा नलगेको बारे राष्ट्र बैंक र इकाइले समेत आवश्यक परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
नेपालबाट लैजानुपर्ने भनिएको एनबीको नामको डलर लाभांश ढाका नलगी आयरल्याण्ड वा अन्यत्र पुर्याएको आशंकामा थप अनुसन्धान भएको हो ।
एसीसीले मिन्टुमाथि बैंकरहरूको मिलेमतोमा नक्कली कागजातको प्रयोग गरी ऋण लिएको, करोडौंको कर छलेको, बैंकरहरूको सहयोगमा शंकास्पद विदेशी मुद्रा कारोबार गरेको र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मुलुक बाहिर लगेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । मिन्टुलाई दुई वर्ष अघिदेखि र छोरा तफ्सीर मोहम्मद आवललाई हालै एसीसीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसैबीच एसीसीले छोरा तफ्सीरलाई न्यूयोर्क र लन्डनस्थित बैंक खातामा रहेको रकमको बारेमा थप अनुसन्धानका लागि गत सोमबारदेखि बयान लिन थालेको छ । एसीसीले बङ्गलादेशको वित्तीय जानकारी इकाईलाई पठाएको पत्रमा तफ्सीरको बारेमा इकाईले गरेको हालसम्मको अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरणसमेत माग गरेको छ । साथै, सो सम्बन्धमा बङ्गलादेशको राजश्व बोर्डसँग पनि आवश्यक विवरण मागेको छ ।
मिन्टुले ट्याक्स हेभन (करको दृष्टिकोणले स्वर्ग) मुलुक बर्मुडामा दर्ता रहेको एनएफएम एनर्जी कम्पनीमार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबार र अपचलन गरेको आशंका गरिएको छ । त्यसैले उनकी श्रीमती र छोराहरूले उक्त कम्पनीको नामबाट न्यूयोर्कस्थित जेपी मोर्गान चेज बैंक र लण्डनस्थित बर्कलेज बैंकमा गरिएको कारोबारको विस्तृत विवरणसमेत माग गरिएको छ । स्रोतका अनुसार एसीसीले मिन्टु र उनको परिवारले विदेशमा गरेको अवैध लगानीको परिमाण पत्ता लगाउन पछिल्लो कदम चालेको बताइएको छ ।
एसीसीले छोरा तफ्सीरलाई न्यूयोर्क र लन्डनस्थित बैंक खातामा रहेको रकमको बारेमा थप अनुसन्धानका लागि गत सोमबारदेखि बयान लिन थालेको छ ।
साथै, क्यालिफोर्निया राज्यको पिट्सबर्गमा रहेको पीएनसी बैंकको शाखाबाट पनि मिन्टु परिवारको शंकास्पद कारोबार हुनसक्ने एसीसीले आशंका गरेको छ । यसबीचमा मिन्टु परिवारले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककको भीआईपी एरियाको रूपमा परिचित सुकुम्भितमा खरिद गरेको आलिशान अपार्टमेण्टलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखिएको छ ।
बर्मुडामा दर्ता गरिएको एनएफएम एनर्जी कम्पनीेको सञ्चालकमा मिन्टु, उनकी श्रीमती नसरिन फातिमा र जेठो छोराको नाम उल्लेख छ । बङ्गलादेशको वित्तीय जानकारी इकाईले ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीको रूपमा सिङ्गापुरमा दर्ता गरिएको उनीहरूको एनएफएम इनर्जी र सो मार्फत् गरिएको लगानीको विस्तृत विवरणमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
मिन्टु बङ्गलादेश चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एफबीसीसीआई) का पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनले सन् १९९० को दशकको प्रारम्भकी तत्कालीन तथा हालकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निकै नजिक रहेर आफूलाई एकाएक चर्चित व्यवसायीमा परिणत गरेका थिए ।
तर, पछि उनी राजनीतिक रङ्ग फेर्दै बङ्गलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) मा आबद्ध भए । अहिले उनी त्यहि पार्टीको उपाध्यक्ष छन् । यसअघि उनलाई सैन्य समर्थित कामचलाउ सरकारले अन्य धेरै राजनीतिज्ञ र व्यवसायीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आवश्यक अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको थियो ।
यहि परिवेशमा एसीसीले नबिलमा रहेको एनबी कम्पनीको लगानीको स्रोत तथा डलरमा प्राप्त लाभांश समेत मिन्टुले अन्यत्र लगेको आशङ्का गरेको हो । यस्तो अवस्थामा नेपालको केन्द्रीय बैंक र वित्तीय जानकारी इकाईले कुनै जानकारी र सूचना नै प्राप्त गरेको छैन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
नबिलको लाभांश लैजाने क्रममा एनबी इन्टरनेशनलको नामबाट दुईजना डलर अर्बपतिले ढाकाको सट्टा अन्यत्र पुर्याउने प्रपञ्च मिलाएको हो वा होइन भन्ने यकिन गर्नुपर्ने दायित्व अब नेपालका केन्द्रीय बैंक र वित्तीय जानकारी इकाईको सामुन्ने आएको छ ।
अब नेपालका अर्बपति डलरले विश्वका विभिन्न मुलुक र महादेशमा सञ्चालन गरेको होटल, रिसोर्ट र अन्य व्यवसायको डलर स्रोत समेत खुल्ने सम्भावना बढेको छ । मिन्टुको अनुसन्धानबाट दुईजना डलर अर्बपतिको गोप्य कारोबारका सबै यथार्थ खुल्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
चौधरीले राष्ट्र बैंकको ताकेतापछि नबिलमा रहेको आफ्नो नामको ५० हजार कित्ता सेयरको डलर लाभांश वापतको ९५ हजार अमेरिकी डलर हालै फिर्ता ल्याएका छन् । उनका बङ्गलादेशी व्यावसायिक साझेदारमाथि डलर अपचलन गरेकोलगायतका विषयमा उता अनुसन्धान भएको अवस्थामा फिर्ता भएको डलर बङ्गलादेशबाट ल्याइयो वा अन्यत्रबाट भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुने स्रोतको दाबी छ ।
कुनैपनि बैंकको विदेशी मुद्रा कारोबारसम्बन्धी निरीक्षण राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले गर्नुपर्छ । सिस्टम अडिट रिपोर्टलगायतका अन्य सबै कार्यको स्थलगत र गैरस्थलगत अध्ययन केन्द्रीय बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
– द्रव्य शाह
दुर्गा प्रसाईको दावी– ओलीले भनेका मात्रै हुन, एमसीसी पास गर्ने नियत थिएन
पुर्वाधार विज्ञ आचार्यले धुर्मुस सुन्तलीलाई किन भने अज्ञानी ?
वायुसेवा निगम अस्तव्यस्तः ७८ दिनदेखि आन्दोलन, दैनिक कार्य प्रभावित
बिहिबार, ३१ भदौ २०७८
सावित्री सुवेदी र १ हजार महिलासँग यौन सम्पर्क गरेका मदन राईको डेढ घण्टे ‘यौन सवाल–जवाफ’
बिहिबार, १७ भदौ २०७८
सांसद गंगा चौधरीको लिलाः सौतामाथिको विवाह नफावेपछि दिदीमाथि नै सौता
सोमबार, २८ भदौ २०७८
भाईको अन्तिम संस्कार छोडेर मुख्यमन्त्रीको शपथमा भिम आचार्य
बिहिबार, १० भदौ २०७८
सरकारी नुन खाएर प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्दा धोवी धुलाई खाने यी व्यक्ति को हुन्?
बिहिबार, ०३ भदौ २०७८
यमनमा २५ हुथी विद्रोही र २० सैनिकको मृत्यु
अफगानिस्तान चलाउन तालिबानलाई समय दिनुपर्छः पाक मन्त्री
हवाई आक्रमणमा परी नाइजेरियामा नौको मृत्यु, २३ घाइते
हिताधिकारीका जायज माग सम्बोधन गर्न सङ्गठन तयारः प्रधानसेनापति
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिदै काठमाडौं व्लर्ड स्कुल (भिडियोसहित)